कुन कुन प्रदेशमा को को मुख्यमन्त्री ? - BirtaJyoti
कुन कुन प्रदेशमा को को मुख्यमन्त्री ?
adminFebruary 10, 2018 12:00 am 0
प्रदेश नम्बर ४ बाहेकका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तयार भएका छन ।
संघीयतापछि भएको पहिलो प्रदेशसभा चुनावपछि देशले सात मुख्यमन्त्री पाउँदैछ ।
शुक्रवारसम्म ७ मध्ये ६ प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने तय भएको छ भने एउटा प्रदेशमा आइतवार यसको टुंगो लागेपछि सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तयार हुनेछ ।
बामगठबन्धनको सहमति अनुसार एमालेले चार र माओवादीले २ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाईसकेका छन ।
प्रदेश नम्वर २ मा चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले मुख्यमन्त्री पाउँदैछ ।
शुक्रवारसम्म एमालेका ३, माओवादीका दुई र मधेशवादी दलका एक नेता मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता चयन भैसकेका छन् ।
कुन कुन प्रदेशमा को को ?
प्रदेश नम्वर १ मा : एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवम पूर्वसंचारमन्त्री शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
शुक्रवार भएको प्रदेशसभा संसदीय दलको चुनावमा राईले एमालेका सचिव समेत रहेका भीम आर्चायलाई २ मतले पराजित गरेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । राई भोजपुर जिल्लाको ‘ख’ बाट निर्वा्चित भएका थिए । यसअघि उनी सञ्चारमन्त्री समेत भईसकेका छन ।
प्रदेश नम्बर २ मा : संघीय समाजबादी फोरम, नेपालका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । फोरम र राजपा नेपाल मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयलगायतका बाँडफाँडमा भने फोरम नेपाल र राजपावीच सहमति बनेको छैन् । राउत पर्साका स्थानीय बासिन्दा तथा संघीय समाजवादी फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । उनी पर्साबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रदेश ३ मा : डोरमणि पौडेल संसदीय दलको नेता बनेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । शुक्रबार ललितपुरमा भएको निर्वाचनमा पौडेल ५८ मतमध्ये ३४ मत प्राप्त गरी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेपछि उनको लागी पनि बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश ४ मा भिडन्त रोचक : यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा आइतवारमात्रै टुंगो लाग्नेछ ।
मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा एमालेबाट पार्टी प्रदेश ४ का संयोजक किरण गुरुङ र केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ खुलेरै लागेका छन् । किरण तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट र पृथ्वी लमजुङ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यहाँको भिडन्त रोचक बन्ने निश्चित छ ।
प्रदेश ५ मा : एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भैसकेको छ ।
एमालेले प्रदेश ५ बाट पोखरेललाई यसअघि नै संसदीय दलको नेता चयन गरिसेकको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको भोलिपल्ट पोखरेल सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।
उनलाई गत निर्वाचनमै बाम गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा उभ्याएको थियो । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को १ क बाट निर्वाचित भएका पोखरेल यो प्रदेशमा एक्ला मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए ।
प्रदेश ६ मा : माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । पार्टी प्रदेश नम्बर ६ को संसदीय दलका नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही (कालीकोट) विहिवार चयन भएका थिए । संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । यहाँ जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारी पनि मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए ।
प्रदेश ७ मा : माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि त्रिलोचन भटट्लाई अगाडि सारेका छ । उनी माओवादी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयन भैसकेका छन् । उनी डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
७ नम्वर प्रदेशमा बीरमान चौधरी र झपट बोहोरा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए ।
निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशतर्फको अन्तिम नतिजा माघ ५ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गरेपछि मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो सँगै आईतबार बाट सात वटै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भएको छ ।
इलाममा बढ्यो चुनावी सरगर्मी
इलाम । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको सरगर्मी बढेको छ । कुल दुई लाख चार हजार ५० मतदाता रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामका उम्मेदवारले चुनावी ... Read More
प्रदेश १ मा अब बन्द हड्ताल हुँदैन : कानुनमन्त्री कार्की
झापा । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशलाई बन्द हड्ताल मुक्त बनाउने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ... Read More
नेकपाको एकता कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै
बिर्ताज्योती- February 5, 2019
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अहिलेसम्मको कार्यप्रगति विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन ... Read More
NEWER POSTअब पैसा कमाउन विदेश नै जानु पर्दैन
OLDER POSTपाँचथरको फिदिम बजारमा आगलागी
बिर्तामोड–गाग्रेभञ्ज्याङ सडक निर्माणले गति लियो
बिर्तामोडको वडा कार्यालयमा बम बिस्फोट
प्रदेश राजधानी माग गर्दै विराटनगरमा आन्दोलन